Monday August 31, 2020 - 19:12:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda u ah dalka Imaaraatka Carabta.
Sida ay sheegeen saraakiisha Booliska dowladda Imaaraatka qarax ayaa maanta duhurkii ka dhacay maqaaxi laga cunteeyo oo lagu magacaabo KFC.
Ugu yaraan laba ruux ayaa laxaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa halka tobanaan kale ay dhaawacyo soo gaareen, qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dhashay Gaaska wax lagu kariyo oo butaacay.
Warbaahinta rasmiga ah ee Afka dowladda Imaaraatka ku hadasha oo soo xiganaysa saraakiisha Booliska ayaa xaqiijiyay in waxyeello xooggan ay ka dhasheen qaraxa, sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga dheehan karay burburka ka dhashay qaraxa.
Afhayeen uhadlay difaaca Madaniga Imaarada Abu Dhabi ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay dabaqa hoose ee dhismaha maqaayada KFC islamarkaana uu geystay burbur.
"Ciidamada Booliska falcelinta degdegga ah ayaa si heer sare ah ula tacaamulay dabka waxayna ku guulaysteen in wax walba ay xakameeyaan 30 daqiiqo gudahood" sidaa waxaa yiri taliyaha Booliska Abu Dhabi.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli ay dalka Imaaraatka gaareen wufuud ka socda Yahuudda iyo Mareykanka iyagoo saarnaa diyaaraddii ugu horraysay ee 'Israa'iil' leedahay oo cagaha dhigata wadankan siyaasaddiisu ujanjeerto dhanka Yahuudda.